DAAWO SAWIRRO: Odayaal dhaqameed ka tagay Muqdisho oo madaxweynaha Somaliland kula kulmay Hargeysa | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Odayaal dhaqameed ka tagay Muqdisho oo madaxweynaha Somaliland kula kulmay...
DAAWO SAWIRRO: Odayaal dhaqameed ka tagay Muqdisho oo madaxweynaha Somaliland kula kulmay Hargeysa
Hargeysa (Halqaran.com) – Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qaabilay Odayaal dhaqameed ka yimid magaalada Muqdisho.
Odayaal dhaqameedkan ayaa u tagay magaalada Hargeysa, sidii ay ula wareegi lahaayeen maxaabiis uu dhawaan madaxweynaha Somaliland cafis u fidiyay.
Madaxweynaha Somaliland wafdiga uu ku qaabilay Hargeysa, ayaa waxaa hoggaaminayay guddoomiyaha dhaqanka ee beelaha Hawiye, Maxamed Xasan Xaad.
Muuse Biixi, ayaa kulan kula qaatay madax dhaqameedka ka socda Beelaha Hawiye xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland.
Odayaal dhaqameedkan ayaa madaxweynaha Somaliland uga mahadceliyay cafiska uu u fidiyay 19-ka maxbuus oo burcad badeednimo u xirnaa, kuwaa oo laga soo wareejiyay dalka Seychelles.
Kulanka, kaddib madaxda dhaqanka ee Beelaha Hawiye iyagoo hoggaaminaya 19-ka maxbuus ee uu cafiska u fidiyay madaxweynaha Somaliland ayaa isla maantaba dib ugu soo laabtay caasimadda Muqdisho.
Wafdiga madaxda dhaqanka ee Beelaha Hawiye ayaa soo sagootiyay la taliyaha madaxweynaha Somaliland ee arrimaha dhallinyarada, Mr. Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan.
Maxaabiistan dhawaan cafiska loo fidiyay ayaa muddo 9 sano ah ku xirnaa jeelka weyn ee magaalada Hargeysa.
Cismaan Basbaas August 2, 2019 At 20:19
@Waan Idin Salaamay Bahda Halqaran,
Waxaan ahay akhriste webkiinan ku cusub oo si kadis ah uga soo dul dhacay. Waxaan rajaynayaa in aynu ku kulanno oo isku aqoon iyo aragti weydaarsanno akhyaar aan fadhiga ku diririn ee maanka ka diriri yaqaanna haddii uu Alle idmo.
Qaabiladdaa heerkaas loo agaasimay haddii aanay ahayn mid dhoolatus isireed lagu maldahay aad baa loogu riyaaqi lahaa xaqiiqdii maadaama ay ummaddeena Soomaaliyeed muddo 60 sanadood ah weli la qabsan kari wayday hanaanyada qalaad ee sidan u kala irdheeyay oo u kala qoqobay ee lagu sii dirqinayo.
Waxaa yaab iyo amankaag ah waxa u diiday kuwa na hor boodaya in ay mar uun dhaadaan in sababta cakirnaantan keentay ay tahay siyaasaddaas shisheeye oo ay ilbaxnimo iyo fariidnimo naga ahaan lahayd iyada oo ay aqoonyahannadeenu inta ay maskaxda maalaan soo hindisaan hannaan sooyaalkeena ku salaysan oo dimuqraaddiyadda la isu guuriyay ee inagu gaar ah ummad ahaan.
HalQaran Staff August 2, 2019 At 21:09
Mahadsanid Cismaan Basbaar. markale ku soo dhow Halqaran.com
Cismaan Basbaas August 2, 2019 At 21:22
@Bahda Sharafta Leh ee Halqaran,
Idinka ayaa mudan walaalayaal oo aad ugu mahadsan soo dhaweyntiina diiran ee qiimaha badan. Runtii waxaa markii ba aad ii soo jiitay tayada sare ee webkiina ee ay ugu doorka roon yihiin qaab dhismeedkiisa iyo farshaxannimada luqadeed ee aydun ku soo baahiseen cinwaannada iyo wararka ba. Sidaas iyo si ka sii sarreysa Inshaa-Allaah.
Mar Kale:- Mahadnaq, Hambalyo, iyo Bogaadin.
Cali August 3, 2019 At 05:10
Isaaqu waa kuwii mahan dhorsano kahor dad masakina oo yaman ka yimid laha inta daroodka ah ha dagano inta isaaqana ha dagana .oromadana dhulka iyada leh si nabada haku dagana lk jaale hawiye futo.madoobe halqofood kama soo dagi karan .ma hawiye manta iloobay arinkas mise isaqa ayaa waxay hawiyaha kusameyen ilooban aniga isaaq iyo hawiye walahi inan jinsi iyo dhalasgo isugali ee hawiyeha waa xoolo burush xaarleh ayaa la marinayaa waxa laga dhadhicinaya dhulkina guba si aan xornimo u helno